Tsy hihemotra ny bakalorea: efa tonga ny laza adina avy amin’ny lycée 60 | NewsMada
Tsy hihemotra ny bakalorea: efa tonga ny laza adina avy amin’ny lycée 60
Hotontosaina ny alatsinainy 17 septambra ka hatramin’ny alakamisy 27 septambra ny bakalorea taona 2018, tsy miova intsony ny daty, araka ny fanambaran’ny tale jeneralin’ny fampianarana ambony, Randrianambinina Blanchard, omaly teny Fiadanana.
“Efa voarindra ny tetiandro sy ny lafiny vola ary ny olona ka sarotra ny hanemotra fanadinana izany, indrindra efa manakaiky ny fotoam-pahavaratra”, hoy ny tomponandraikitry ny fampianarana ambony amin’ny sekolim-panjakana sy ny tsy miankina, Razafimahatratra Dieudonné. Mbola manana iray volana sy tapany ny mpampianatra hamitana ny fizarana sy ny zavatra mila famerenana. Maro tamin’ireo sekolim-panjakana rahateo no nanohy ny fampianarana ho an’ny kilasy famaranana, araka ny fidinana ifotony hitan’izy ireo tany amin’ny faritra maro. Tonga ny laza adina avy amin’ny lycée 60, nahitana ny mpamolavola ny laza adina araka ny fandaharam-pianarana ka tsy misy ahina ny fanomanana ny fanadinana bakalorea.
Hozaraina ny 16 aogositra ny taratasy fiantsoana
Hozaraina manomboka ny 16 aogositra ho avy izao ny taratasy fiantsoana, nizarana andraikitra ireo lehiben’ny foibem-panadinana ary tomombana ny efitrano handray ny mpiadina, araka ny nambaran’ny filoha lefitra misahana ny fikarohana sy ny fanofanana eny amin’ny onivesiten’Antananarivo, Andrianarimanana Jean Claude. Andraikitry ny minisiteran’ny Fampianarana ambony ny fanomanana rehetra fa manome ny olona hampandeha ny fanadinana ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena.
Momba ny adina fanatanjahantena kosa, omena baiko ny mpiandraikitra any amin’ny Dren hamita ny fanadinana ho an’ny bakalorea, manomboka ny 6 aogositra ka hatramin’ny 7 septambra ho avy izao. “ Ny Dren eto Analamanga sy ny manodidina sisa no tsy nahavita ny fanadinana. Ho an’ny BEPC, aorian’ny fiatrehana ny adina an-tsoratra, ny 6 septambra vao hotontosaina ny adina fanatanjahantena ho an’ireo tsy nanao izany”, hoy ny talen’ny fampianarana ambaratonga faharoa fototra ao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazana, Iberanandrasana Johna.
75 taona ny mpiadina zokiny indrindra
Nitombo 0,98% ny isan’ny mpiadina ho an’ny fanadinana bakalorea, taona 2018 raha mitaha ny tamin’ny taon-dasa. Mahatratra 184 708 ny mpiadina manerana ny Nosy. 175 526 ny mpiadina amin’ny fampianarana ankapobeny, 9 182 kosa ho an’ny fampianarana teknika. Nidina ny isan’ny mpiadina ho a’ny sokajy C 4874, 37 320 nisafidy ny sokajy D, 120 327 ny sokajy A2 ary 13 005 ny sokajy A1. 11 taona ny zandriny indrindra, ho an’ny sokajy A2 ary 75 taona ny zokiny indrindra, ho an’ny sokajy D. Samy eto Antananarivo avokoa izy mianaka ireo.
Ahitana mpiadina 74 809 eto Antananarivo. Mampiavaka ny bakalorea amin’ity taona ity ny nanokafana foibem-panadinana vaovao ao amin’ny distrikan’i Beroroha (Atsimo) izay manana mpiadina manodidina ny 100 eo ho eo.